के महिलाले चरम यौन सन्तुष्टि पाउँदैनन् ?
निशान न्युज कार्तिक १६, 2076
काठमाडौं । शारिरीक सम्पर्कका बेलामा प्राप्त हुने चरमसुख पुरुषलाई जति छिटो चरमसुख प्राप्त हुन्छ । महिलालाई यस्तो सुख प्राप्त गर्न कठीन हुन्छ र ढिलो हुन्छ । महिलालाई कति बेला सन्तुष्ट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पुरुषहरुले हम्मेसी याद गर्दैनन् । त्यही भएर पनि यौन सम्पर्कपछि महिलाहरु त्यति खुसी भएको पाइदैन ।
यौन उत्तेजना हुँदा सफा रंगविहीन रस केही मात्रामा पुरुषको मूत्रद्वारमा देखिन्छ । यतिबेला महिलाको योनिबाट प्रशस्त रस आउने कुरा हामीलाई थाहै छ । के चरमसुखका बेला महिलामा फरक किसिमको रस आउँछ त ? केही अध्ययनले महिलाहरूको पनि ‘स्खलन’ हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्, तर कतिपय वैज्ञानिकले पुरुषमा वीर्य स्खलन भएजस्तै महिलाको स्खलन नहुने कुरा बताएका छन् ।
त्यसैले महिलाको स्खलनको कुरा विवादित नै छ । एउटा कुरा के भने पुरुषको वीर्य स्खलन महिलामा हुने यस्तो स्खलनको घटनाभन्दा निकै फरक कुरा हो ।
पुरुषलाई चरमसुख पाएर पुरानै अवस्था फर्किएपछि केही समयका लागि यौन रूपमा उत्तेजित गर्न सकिँदैन, तर महिलाले यौन चरमसुखपछि पनि यौन क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।
कतिपय महिलाले कहिल्यै पनि चरमसुख प्राप्त गर्दैनन् भन्ने मतमा अडिएका हुन्छन् भने कतिपयले महिलाले चरमसुख प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने विधिका विषयमा आ–आफ्ना तरिका पस्किरहेका हुन्छन् ।
महिलाको चरमसुखका बारेमा विभिन्न भ्रमलाई चिर्दै वैज्ञानिक तथा यौन मनोविज्ञहरुले विभिन्न ६ वटा तथ्य पत्ता लगाएका छन् । न्यू साइन्टिस्ट म्यागेजिनमा छापिएको समाचार अनुसार महिलाको चरमसुखका विषयमा पत्ता लागेका ६ वटा रोचक तथ्य यसप्रकार रहेका छन् ।
महिलाको योनीभित्र जी स्पट हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । योनीभित्र हुने यो स्थान निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । यहीँ क्षेत्रमा घर्षण पैदा भएसँगै महिलालाई चरमसुख प्राप्त हुन्छ । यद्यपि यो क्षेत्र योनी भित्रको ठीक कुन भागमा हुन्छ भन्ने कुराको एकिन भने गर्न सकिँदैन ।
चरम सुखका बेला महिलाको मस्तिष्कको अधिकांस भाग निस्कृय हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने जब मान्छेको दिमागमा सेक्सले ठाउँ पाउँछ, अरु विषय स्वतः निस्कृय हुन्छन् । अझ चरम सुखका बेला त संवेदनाको अनुभुति गर्ने क्षेत्रसमेत निस्कृय हुन्छ ।
धेरै महिलाले चरम सुख प्राप्त गर्नै सक्दैनन् । सन् १९९९ मा अमेरिकामा गरिएको एक सर्भेक्षणले ४३ प्रतिशत अमेरिकी महिलामा यस्तो समस्या भएको देखाएको थियो । यसको निस्कर्ष के हो भने पुरुषको तुलनामा अत्यधिक महिलामा यौन सुख प्राप्त नगर्ने जैविक कमजोरी नै हुन्छ ।
चरमसुखलाई वंशाणुले फरक पार्छ । अनुसन्धान अनुसार चरमसुखमा हुने ४५ प्रतिशत विविधता वंशाणुकै कारण हुन्छ । कतिपय महिलाले सम्भोगका बेला चरमसुख पाउन सक्दैनन् र केहीलाई हस्तमैथुन गर्दा पनि यौन सुखको अनुभुति हुँदैन । यसो हुनुमा वंशाणुगत कारण मुख्य हुन्छ ।
चरमसुख दिने प्रविधि बन्दैछ । जैविक कारणले नै चरमसुख पाउनबाट बञ्चित महिलाहरुलाई यौनसुखको अनुभुति दिलाउन वैज्ञानिकहरुले प्रविधिको विकाश गरिरहेका छन् । यौन उत्प्रेरकको काम गर्ने यस्तो प्रविधि महिलाको सुसुम्ना अर्थात् ढाडभित्रको नसामा जोडिनेछ । जसले महिलामा चरम सुख प्राप्त नहुने समस्या समाधान गरिदिनेछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको चरमसुखका विषयमा रहेका भ्रम सबै मेटिन सकेका छैनन् र यो विषयमा रहेका सबै प्रश्नको उत्तर प्राप्त भैसकेको छैन । यो विषय क्रम विकाशका वैज्ञानिकका लागि पनि निकै कठीन विषय बनिरहेको छ । कतिपयले त यौन सुख महिलाका लागि अनावश्यक बोझ भएको बताउँछन् ।